Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee loo dhisayo backlinks ee 2016 si kor loogu qaado ganacsiga yaryar SEO?
Inta badan, milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ayaa badanaa la kulmaan dhibaato adag oo leh dhismo tayo sare leh oo heer degaan ah. Looma baahna in la sheego in la aqoonsado farsamooyinka ugu fiican ee dhismaha backlinks ee sannadka 2016 weli waa mabda'a ah dadaalka ugu weyn ee SEO-ga (Search Engine Optimization) inta badan annaga. Iyo mid ka mid ah arrimaha ugu caansan, oo ay la kulmaan milkiilayaasha ganacsiga yaryar, gaar ahaan, waa in laga fogaado in dib-u-tayadooda hoose ee bogooda xiriirkooda. Dhamaanteen waan ognahay in makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google sida loola socdo in ay sii socdaan nidaamka xadgudubka ee dhismaha xidhiidhka - adventure in peru. Taas macnaheedu waa in dhismaha dib loo dhisayo 2016-ka dabiiciga ah oo amaan ah ayaa kaa doonaya inaad ka fogaato dhammaan xeeladaha khatarta ah ee Black-Hat ee isku xira xeeladaha, sida is-dhaafsiga isku-xidhka (haddii kale, isku-xidhka isku-xirka), meeshana lagu bixiyo lacagta, isagoo leh hal ujeedo - inuu kufaraxo darajada sare ee Google ee algorithm. Aynu wajahno - qaybta libaaxyada ee khiyaamooyinka iyo ficiladani ma shaqeeyaan mar dambe. Inkasta oo inta ka hadhayna ay weli yihiin kuwo halis ah, sidaas darteed waxaa suurtogal ah in ay waxyeelo u geysato horumarka sii socota ee boggaaga ee mustaqbalka la filayo. Taasi waa sababta aan hoosta kuugu soo bandhigayo liiska gaaban oo leh saddex waji White-Koof oo ay u arkaan mashaariic yar oo internetka ah oo ah kuwa ugu macquulsan oo wax ku ool ah ee dib u dhiska dib loogu dhisayo 2016. Halkan waa.
oo leh saamileyaal sare oo la xiriira ganacsigaaga ama ganacsiga ganacsiga. Tusaale ahaan, waxaad noqon kartaa mid taagan oo ka mid ah barta casriga ah ee gaarka ah, la wadaagto khibradaaga, oo marmar kugu abaalmariyo xiriirada dabiiciga ah ee tayo sare leh oo dib ugu noqda boggaaga ama blogkaaga. Sidaa daraadeed, xasuuso in dhabarka noocaas ahi uu aad ugu kalsoon yahay marka loo eego wixii ku soo kordhay boosteejooyinka ama xitaa la qorsheeyay.
Ka fikir inaad kafaalaqaadiso ilaha saddexaad ee isbahaysiga ah (sida blogyada wararka ama goobaha warbaahinta), iyo sidoo kale xafladaha abaalmarinta, hay'adaha samafalka, iyo shirarka wax ka qabta dadka ku nool juqraafi gaar ah. Anigoo ah ganacsade yaryar, waxaan ku talineynaa ujeedo loogu talagalay dadka ku nool dhulka, halkii shirkado waaweyn ama shirkado caalami ah. Habkaas, kaliya ma hagaajin kartid aqoonsiga magaciisa laakiin "kasbasho" oo u qalma dib-u-celinta tayo sare leh.
Maxay tahay inaad dib u farsameysid? Waxaan u jeedaa in halkii usbuuc usbuuc usbuuc usbuuc ka shaqeyn lahaa dameer-shaqo, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa waxa u adeega tartamayaashaada ama dhinac kasta oo saddexaad oo ku yaal Webka, iyo inaad sare u qaaddo faa'iidadaada. Wax walba waa sahlan - ku bilaw inaad ogaato qaar ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee waxtarka ku jira nuucaaga (waxaan ku talineynaa isticmaalka qalabyada internetka sida BuzzSumo - inuu raadiyo fursadaha content, iyo qaabka cilmi-baarista webka sida Moz's Open Site Explorer, Falanqaynta Naqshadda, ama Qaylo-dhaanta Naqshadaynta SEO falanqaynta tayada dhabarkaaga tartanka. Marka xigta, ka feker waxa wanaagsan ee si wanaagsan loo hagaajin karo oo abuuro wax keenaya qiime ka badan, ama siinta fikrado qoto dheer isla mowduuc. Marka wax-qabadkaaga cusub ee la dhamaystiray uu diyaar u yahay, dhiirrigelinta adigoo kaashanaya - oo aad samaysay.